Bal Maxay Galabsadeen oo loo Dilay? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Bal Maxay Galabsadeen oo loo Dilay?
Bal Maxay Galabsadeen oo loo Dilay?
Alle ha u naxariistee waxaa maanta dadkii badnaa ee ku dhintay Huteelka Central kamid ahaa Maxamed Aadan Guuleed (Caano Geel) iyo C/Shakuur Mire Aadan oo labaduba ka tirsanaa bahda saxaafadda 20kii sano ee u dambeysay, ahaana qoraayaal aad loo akhriyo qormooyinkooda, xog ogaalna u ahaa dhaqanka, siyaasadda iyo suugaanta Soomaaliya.
Geerida labadan wariye ee u xuubsiibtay siyaasiyiin sanadihii dambe,waayadan dambe ayaa waxa ay kusoo beegantay maalin kahor xuska maalinta loo asteeyay Afka Hooyo iyada oo la filayo in Madax sare iyo aqoonyahanno dhanka dhaqanka iyo Afka Soomaaliga ah ay kasoo qaybgalayaan xuska maalintaasi.
Caano Geel iyo Cabdishakuurba waxa ay ahaayeen shakhsiyaad diinta ku wanaagsan, dhaqan suuban, Soomaalinimada jecel, una soo joogay wixii Soomaaliya ka dhacay 1991dii kadib. Sidaasi darteed geerida labadan marxuum waa khaasaro qaran oo bahda Saxaafadda, Qoraayaasha iyo bulshada Soomaaliyeedba soo gaartay.
Maxamed Aadan Guuleed (Caano Geel):
Alle ha u naxariistee waxa uu ahaa aasaasaha wargeyska maalinlaha ah ee Xog-Ogaal oo dhawr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay soo baxayay, isaga oo duruufo adag ku soo shaqeeyay. Sanooyinkii dambe waxa uu ku noolaa isaga iyo qoyskiisaba dalka Ingiriiska. Hase yeeshee laba sano kahor ayuu dalka dib ugu soo noqday si uu qayb uga qaato dib u dhiska Soomaaliya iyo nabadeynteeda.
Khataro badan ayuu ka badbaaday oo ay kamid ahaayeen isku day dil xilliyadii ay hogaamiye kooxeedyada ay Muqdisho ka talin jireen. Qoraallo badan oo xiiso leh, haatanna kayd u ah jiilalka dambe ayuu ka tagay Marxuum Caano Geel kuwaasoo u baahan in buugaag lagu uruuriyo.
Bishii May ee 2014 ayaa loo magacaabay Guddoomiye Ku Xigeenka dhanka Arrimaha Siyaasadda iyo Dimuqraadiyeynta ee Gobolka Banaadir. Intii uu xilka hayey wuxuu Marxuumka kaalin mug leh ka qaatay horumarinta Gobolka.
Haatan wuxuu ahaa xubin kamid ah qabanqaabiyayaasha munaasabadda xuska afka Soomaaliga ee 21ka Febraayo oo ah maalin micna weyn ugu fadhidey isaga iyo inta Afka Soomaaliga hormarintiisa waqti geliya. Xas iyo carruur ayuu ifka uga tagay.
Cabdishakuur Mire Aadan:
Wuxuu ku dhashay, kuna barbaaray magaalada Muqdisho, isaga oo ka baxay Dugsigii Sare ee Badda (Maritimo). Dagaaladii sokeeye kadib waxa uu u wareegay Gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso isaga oo halkaasi ka sameeyay Wargeys iyo Idaacad, mudana kamid ahaa bahda saxaafadda Puntland.
Hase ahaatee waxa uu u xuub siibtay siyaasi, xilal dhawr ahna ka qabtay Maamul Goboleedka Puntland. Intuu halkaa ku sugnaa waxa uu diyaariyay buug dhaxal gal ah oo la yiraahdo “Kobicii Islaamiyiinta” oo uu uga warramay dhaqdhaqaaqii xarakooyinka Islaamka ee Soomaaliya ka hana qaaday wixii ka dambeeyay 1960kii. Wuxuu si joogta ah maqaallo kala gedisan iyo buugga Koboca Islaamiyiinta lagu soo daabici jiray Wargeyska Xaqiiqa Times. Alle ha u naxariistee waxa uu ifka uga tagay xaas iyo caruur hadda ku sugan Boosaaso.
Labada marxuumba waxa ay geeriyoodeen xilli ay gudanayeen waajibaadka Salaadda Jimcaha.
Previous articleMadaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay Qarixii Huteel Central
Next articleMadaxweynaha Jabuuti oo Goordhaw Soo Gaaray Muqdisho